Agaasimaha ciyaaraha PSG oo ka hadlay mustaqbalka Neymar iyo Mbappé – Gool FM
(Paris) 07 Seb 2020. Agaasimaha ciyaaraha Paris Saint-Germain ee Leonardo Araújo ayaa shaaca ka qaaday inay qaadeen tallaabo rasmi ah oo qandaraaska loogu kordhinayo xiddigaha kooxda, ee Neymar Jr iyo Kylian Mbappé.
Labadan xiddig muhiimka ka ah safka kooxda Paris Saint-Germain ee Neymar Jr iyo Kylian Mbappé ayaa lala xiriirinayay inay ka tagi doonaan garoonka ay ku ciyaarto PSG ee Parc des Princes.
Haddaba Leonardo Araújo ayaa wareysi uu ku bixiyay “Canal+” wuxuu kaga hadlay mustaqbalka xiddigaha Neymar Jr iyo Kylian Mbappé, wuxuuna yiri:
“Waxaan dooneynaa in labada ciyaaryahan ee Neymar Jr iyo Kylian Mbappé ay nala sii joogaan, wax walba way u cadahay qof walba”.
“Horey ayaan ula hadalnay iyaga, waana inaan helno waqtiga saxda ah iyo habka saxda ah ee aan wax ku dhameystiri karno”.
“Waxaan nasiib u yeelanay inaan kooxda ku heysano labo ciyaaryahan oo iyaga oo kale ah, waxaan heysanaa ciyaartoyda ugu fiican adduunka kaddib Messi iyo Ronaldo, marka inay nala sii joogaan waa arrin muhiim ah” Ayuu yiri Leonardo Araújo.
Luis Enrique oo ammaanay da’ayarka Ansu Fati kaddib wax qabadkiisa kulankii xalay ee Ukraine